3 Journals iyo 5 Waayo-aragnimada Geomatic Field - Geofumadas
Sheekooyinka 3 iyo waayo-aragnimada 5 ee goobaha jilicsan
Maarso, 2013 Geospatial - GIS, qgis
Waa wakhti ay dib u eegaan joornaalada qaarkood kuwaas oo daabacaadihii dhowaan soo baxay; Halkan waxaan ka tagaa khibrado xiiso leh oo ka soo baxa daabacaadda ugu dambaysa ee majaladdan.
1 Khibradaha isticmaalaha ee isticmaalka Barnaamijka Furan ee GIS Software.
Waxa xiiso leh in la siiyo akhriska a this article, taas oo muujinaysa waxa ay dadka Intetics hirgelinta qalab ... inkastoo guulo waa weyn daba noqonayaa Quantum GIS, magacaaba sida ay Grass iyo gvSIG loo isticmaalo hababka qaar ka mid ah. Qiimaha tani waxay ku jirtaa daacadnimada sheegidda waxa u shaqeeyay iyo waxa aan ahayn mid fudud.
2. Macluumaadka LiDAR ee guriga lagu sameeyo.
waayo-aragnimo Drakkar na tusayaa sida ay suurto gal u tahay in la hubeeyo our armatuste u gaar ah iyo in la dhiso xogta LiDAR noo gaar ah.
James Fee wuxuu inoo sheegayaa sababta Python u muuqato inay tahay saaxiibka ugu fiican GIS
Ryaboshpako wuxuu sharxayaa sida ay u badan tahay inuu yahay adeegyo web site oo laga helo GeoPDFs.
3 Sayniska Juqraafiga ee daruurta
Tani waa maqaal uu soo saaray Denilson Silva, oo sharxaya tallaabooyinka ugu horreeya ee ka faa'iideysanaya adeegyada ArcGIS Online iyo ArcGIS Explorer si ay ugu adeegaan xogta ayna ka faa'iidaystaan.
Inta kale ee majaladda, taas oo dhacda warka 71, wuxuu leeyahay mawduucyo aad u xiiso badan oo aan rajeyneyno in dhawaan la heli doono af Spanish:
Maamulka degmada ee saxda ah
Khariidaynta ujeedooyinka juqraafiga ah
Valenty Gonzalez oo ka mid ah "Kumaa yaa"
ISO 19152 iyo qaabka LADM ee Brazil
In kastoo aan soo jeediyo inaad eegto bogga Isbanishka, waxaa hadda la heli karaa daabacaadda 70 oo ay ku jiraan mowduucyada sida:
Qaybta koowaad ee sida aad uga heli karto meel ka baxsan Google Earth
Tirakoobka suuqa saldhigga ah
Qaybta koowaad ee hababka wax lagu qaado
Xaqiiqda hadda jirta ee gawaarida aan cidi lahayn
4 Bixinta halkii canshuur laga qaadi lahaa
Tani waa waayo-aragnimada City of Boston, kuwaas oo sanado badan ay la halgameen fikradda waalan in hay'adaha, dhismayaasha iyo ka dhaafida guryaha bixiyaan lacag halkii canshuuraha. Waxay u muuqataa in istaraatiijiyadda la hirgeliyay ee 2008 ay kor u qaadayso faa'iido nalooga koobi karo mowduuceena.
5 Nidaamka gaadiidka dadweynaha ee nooca BRT (Bus Rapid Transit) iyo horumarinta magaalooyinka ee Latin America.
Laga soo bilaabo tan, waxaan la hadlay dhowr maalmood kahor qaab dhismeedka mid ka mid ah horumarinta Tegucigalpa, Honduras. Waa hagaag, Daniel Rodríguez iyo Erik VergeL waxay sameystaan ​​bandhig farshaxan leh oo ku haboon ururinta.
Ka eeg majaladda
Eeg joornaalada kale
Google Earth GPS majallado mapserver
Post Previous«Previous SuperGIS Desktop, waxoogaa isbarbardhig ah ...
Post Next View iyo beddelid files billabo ka versions kala duwan ee AutoCADNext »